सुशान्त प्र’करण: एनसिबीले दीपिकालाई बोलाएपछि कंगनाकाे झ’टाराे….. – Dainik Sangalo
सुशान्त प्र’करण: एनसिबीले दीपिकालाई बोलाएपछि कंगनाकाे झ’टाराे…..
September 25, 2020 250
सुशान्त सिंह आत्मह-त्या प्र-करणमा अगाडि आएको ड्र-ग्स मा’मिलामा नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो(एनसिबी)ले बलिउडमा खास ध्यान दिएको छ। बलिउड र यसका ड्र-ग्स क’नेक्सनबारे एनसिबीले ग’हिरिएर अध्ययन गरिरहेको छ। यसैबीच ड्र-ग्स मा’मिलामा बलिउडका ठुला नामहरू सारा अलि खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खम्बाटा, श्रद्धा कपुर, दीपिका पादुकोण आएपछि एनसिबीले यी सबै सिताराहरूलाई सो’धपुछका लागि बोलाएको छ।
दीपिका, सारालगायतलाई सो’धपुछका लागि एनसिबीले बोलाएपछि बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतले यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेकी छन्। कंगना ट्वीटरमा लेख्छिन्, “अन्ततः पहिलो पटक बलिउड मा’फियाहरूले यो सोचिरहेका होलान्, – काश! हामीले सुशान्तलाई न’मारेको भए! र कंगनालाई यतिधेरै विवश नपारेको भए! पहिलोपटक उनीहरू आफ्नो क्रु’रता र मौ’नतामाथि पछुताइरहेका छन्। समयलाई पछाडि लैजान सकेको भए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले पहिलोपटक सोचिरहेका छन्।”
सुशान्तको नि’धन भएदेखि नै कंगना उनको लागि न्यायको लडाइँ लडिरहेकी छन्। कंगनाले नै सबैभन्दा पहिले सुशान्तको मृ’त्युलाई आ’त्मह’त्या दा’बी गरेकी थिइन्। बलिउडमा भएको ड्र-ग्स क’नेक्सनलाई बाहिर ल्याउनमा पनि कंगनाको हात छ।
Prevपहिरोसँगै बस भिरबाट खस्दा एकको मृत्यु, ६ जना घाइते
Nextक्वारेन्टिनमा लैजान भन्दै प्रहरी गाडी लिएर गएपछि २०० जनाको भागाभाग
भुषको आगो सल्के झै कोरोना संक्रमित बढेपछि बाँकेमा आजदेखि तीन दिन निषेधाज्ञा जारी
आज २०७७ साउन ३१ गते शनिबारको राशिफल